प्रधानमन्त्रीको आँटलाई मान्नैपर्छ
प्रकासित मिति : २०७६ कार्तिक १६, शनिबार १३:३२ प्रकासित समय : १३:३२
आधा समय प्रधानमन्त्रीको उपचार मै बितेको छ । त्यती साह्रो बिरामी पर्दा नि कृयाशिल हुने कुरा राम्रै मानौ तर मान्छे कति दाैडन्छ भन्दा पनि कता के कामका लागी डौडिरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बैकुन्ठ मानन्धरलाई जित्ने गरि डौडिए पनि भिर तिर डौडियो भने छिटो लड्ने बाहेक अरु के उपलब्धि होला र । ओलिको दौडधुम म चाही त्यस्तै मान्छु ।
पाटीमा अर्का चतुर अध्यक्ष छ्न तर बिरामी हुदा पनि पाटीको जिम्मा अरुलाई दिनै नहुने , पाटीमा असङ्ख्या नेता बेरोजगार भएर कुलत तिर फस्ने डर छ । दैनिक बलात्कारमा परेर जेल जादै छ्न तर गुटका बाहेक अरु कसैले जिम्मा पाउछ्न कि भन्ने चिन्ताले ओलि झन बिरामी परेका छ्न । नेकपामा अरु थुप्रै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने नेता छ्न बिस्ताराबाट बिदेशी हस्पिटलबाट मन्त्री परिषदको बैठक चलाउनु पर्ने ।
त्यसकारण यस्तो लाग्छ उनि साहासी छ्न आटिला छ्न । उनि अहिले मात्रै हिक्मतीला होइनन पहिलैबाट हो आट नहुदो हो त झापा आन्दोनमा बर्ष पनि नपुगेको बच्चा सामन्त घोषणा गरेर कसले काट्न सक्थ्यो ? त्यत्रो हत्या कान्डबाट आएको राजालाई दाम चडाएर ढोग्ने आट अरु कस्को हुन्थ्यो ?
रास्ट्रबादको आन्दोलनबाट उठाएको माले पाटी केहि समयमा नै माहाकाली नदि सजिलै अरु कसले बेच्न सक्थ्यो र ? देश नै गणतन्त्रमा आन्दोलित हुदा कम्युनिस्ट नेताले गणतन्त्र भनेको बैयल गाडा चडेर आउछ भन्ने आट माधब झलनाथले कहाँ सक्थे र ?
परिवर्तनका लागी रुकुम,रोल्पामा युद्ध हुदा सङ्कटकाल अनुमोदन गरेर सोझा गरिब माथी गोलि हान्ने आदेश अरु कसले दिन सक्थ्यो र ? धादिङमा जन्न्मेको चरीलाई गुन्डाको नाइके बनाएर गोलिको सिकार बनाउन चानचुने हिम्मत चाहिन्छ । त्यो ओलिसँग मात्रै थियो ।
मधेसमा आन्दोलन हुदा यात्रा गरेर झडप गराएर मान्छे मार्ने आट राजासँग भएको भए गद्दी छड्ने थिएनन होला । सबिधान जारी गर्दा मदेशी थारु माथी ताकी ताकी गोलि हान्ने आँट प्रचण्ड , देउवा, बाबुरामसँग थिएन । उनै ओलिको फर्मानले काम गर्‍यो । ३३ किलो सुन कोहि आट नभएकाले पचाउन सक्छ ? हाम्रा प्रधानमन्त्री आट भएकाले नै पचाएका हुन ।
चिनमा हजार रुपैया भ्रष्टाचार पचाउन नसकेर नेताहरु फासीमा लड्किन्छ्न । हाम्रा प्रधानमन्त्री हेर्नु त कति आटिला एउटै जहाजमा ६ अर्ब पचाइदिन्छ्न । देशका सुकुम्बासी ४ हात घडेरी बनाउन नसकेर सबै पाटी चाहार्छ्न । प्रधानमन्त्री बालुवाटार सजिलै पचाइदिन्छ्न ।
विद्यार्थी शुल्क तिर्न नसेकेर रुन्छ्न माफियासँग सगै भात खाइदिन्छ्न । गोबिन्द केसि सजिलै थर्काउछ्न , बलात्कारिलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन्छ्न । राज्यकोषको रकम सजिलै कार्यकर्तालाई बाड्छ्न । आफन्तलाई सजिलै नियुक्ती दिन्छ्न ।
उनको यो हिम्मतलाई मान्नैपर्छ जे होस उनको हिम्मतले आसेपासेलाई सजिलो भयो होला जनतालाई भने गलगाणनै भएको छ । ट्यागको कम्युनिस्ट भन्दा त्यागको गोबिन्द केसि नै हाम्रो हितमा छ्न ।